घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र - नेपालबहस
घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र
सन्तोष गौतमसः रासस
| १२:४६:४९ मा प्रकाशित
२८ फागुन, घोडेपानी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । भ्रमणमा आउने पर्यटकको सुविधाका लागि धमाधम पूर्वाधार विस्तार भएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विसं २०७५ मा घोडेपानी–पुनहिललाई १०० वटा स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको थियो । पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत भएसँगै निजी क्षेत्र, समुदाय र सरकारी तबरबाट करोडौँका पूर्वाधार निर्माण भएका हुन् ।
घोडेपानीका व्यवसायीले शहर बजारमा जस्तै पक्की घर र होटललाई सुविधायुक्त बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पाँच वर्षअघि घोडेपानीका होटलको क्षमता दैनिक ५०० को हाराहारीमा थियो । होटलको क्षमता बढाएर एक हजारभन्दा बढी पुर्याएकाे होटल व्यवस्थापन उपसमितिका उपाध्यक्ष मीना पुन बताउँछन् । “पाहुनाले बास नपाएर डाइनिङ हल र भान्छाकोठामा सुत्नुपर्ने समस्या छैन”, उनले भने, “तातो पानी, एट्याच बाथरुम भएका कोठा र वाइफाइको सुविधा छ ।”
समुद्री सतहदेखि दुई हजार ८०० मिटरको उचाइमा अवस्थित घोडेपानीमा २५ सुविधा सम्पन्न होटल छन् । यसअघि ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका घरमा होटल सञ्चालन गरिएको थियो । अधिकांश व्यवसायीले पक्की घर बनाएका छन् । होटलको सुविधा र क्षमता बढाउन न्यूनतम रु दुई करोडदेखि रु सात करोडसम्म लगानी गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
विसं २०७६ को असारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ५० लाख बजेटबाट मार्ग खोलिएको चित्रे हुँदै घोडेपानी जोड्ने चार किलोमिटर सडक थप रु। २५ लाख खर्चेर ग्राभेल गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न रु २७ करोडको आयोजना सञ्चालन गरेको छ । घोडेपानीका व्यवसायी रनबहादुर पुनले सडक सुविधासँगै सवारी साधन चढेर आउने आन्तरिक पर्यटक बढेका बताए । “निर्माण र खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी सहज र खर्च सस्तिएको छ”, उनले भने, “पोखरेबगर–चित्रे सडक कालोपत्रे र कास्कीसँग सडक जोडिएपछि झनै सजिलो हुन्छ ।”
घोडेपानीदेखि कास्कीको उल्लेरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु १० लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले पालिका र प्रदेश सरकारका कार्यालयमार्फत घोडेपानी क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ५० लाख बजेटका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बताए । “कोरोनाका कारण यसपालि पर्यटक नआएकाले फुर्सदमा भएका यहाँका बासिन्दा अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन भएका छन्”, अध्यक्ष पुनले भने, “पर्यटक आउँदा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे पाउन मुस्किल हुन्थ्यो । फुर्सदको समयलाई विकासमा लगाएका छन् ।”
घोडेपानी र त्यहाँदेखि दृष्य अवलोकन स्थल पुनहिल जाने बाटोमा प्रदेश सरकारको रु २५ लाख सहयोगमा २३ वटा सोलार बत्ती जडान गरेर रातको समयमा उज्यालो बनाइएको छ । सोलार बत्ती जडान गरेपछि घोडेपानीमा बास बसेर उज्यालो नहुँदै पुनहिलमा जाने पर्यटकलाई सहज भएको टोल सुधार समितिका अध्यक्ष वीरेन गर्बुजाले बताए ।
पानी र हिउँ परेको अवस्थामा सुरक्षित बसेर दृष्यावलोकन गर्ने सुविधाका लागि पुनहिल परिसरमा रु २७ लाख ५० हजार खर्चेर तीन कोठे आश्रयस्थलको पक्कि भवन निर्माण भएको छ । यो योजनाका लागि पर्यटन विभागले गाउँपालिकामार्फत बजेट पठाएको थियो । पुनहिलको नजिकै पर्ने फुलबारीमा प्रदेश सरकारले रु १० लाख खर्चेर गुराँस उद्यान बनाउन लागेको छ । २० रोपनी जमीनमा बनाउन लागिएको उद्यानको तारबार गर्नुका साथै शौचालय निर्माण गर्ने योजना छ ।
नेपालमा पाइने ३१ प्रजातिका गुराँस एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न सकिनेछ । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रु २० लाखको लागतमा घोडेपानीदेखि प्यारीबाराही ताल जोड्ने साइकल र घोडा टे«ल, चरा अवलोकन स्थल र घोडा बाँध्ने तबेला बनाउन लागेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले बताए ।
योजनाको डिजाइन र लागत अनुमान तयार पारी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिसकेको उनले बताए । तीन किलोमिटर पदमार्ग बनाउन लागिएको हो । यसैगरी प्यारीबाराही तालको वरपर ३८० मिटर लामो ढुङ्गा बिछ्याएको पैदलमार्ग बनाउन घराम्दी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई रु तीन लाख ८४ हजार उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको रु आठ लाख बजेटबाट घोडेपानी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारको काम शुरु भएको छ । स्थानीयको थप रु आठ लाख जुटाएर ३० हजार लिटर क्षमताको भण्डारण ट्याङ्की निर्माण र मुहानबाट थप पानी ल्याउन लागिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकसर बुद्धुजाले बताए ।
बीस वर्षअघि भारतीय दूतावास र रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा निर्माण भएको घोडेपानी खानेपानी आयोजनाको ट्याङ्की र पाइप सानो भएकाले क्षमताले माग धान्न नसक्दा समस्या भएको छ । गाउँपालिकाबाट रु आठ लाख विनियोजन भएको मगर सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरेको घोडेपानी आमा समूहको भवन निर्माण जारी छ ।
समूहको कोषमा रहेको थप रु १० लाख लगानी गरेर पक्की भवन निर्माणलाई पूर्णता दिने पदाधिकारीले बताएका छन् । घोडेपानीमा ढल व्यवस्थापनका लागि नाली बनाउन गाउँपालिकाले थप रु छ लाख विनियोजन गरेको छ । घोडेपानी गाउँभित्र विद्युत्को तारलाई व्यवस्थित बनाउन केबुल तार राख्न थालिएको छ ।
गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको रु २० लाख बजेटबाट पुनहिल हुँदै मोहरे, घोडेपानीदेखि चित्रे, खिवाङ र घान्दु्रकतर्फ जाने करीब दुई किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ । घोडेपानी–प्यारीबाराही पदमार्ग निर्माण समितिका अध्यक्ष सुशील पुनले घोडेपानी भित्रने पाहुनाको बसाई लम्बाउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणका साथै प्रचारप्रसारमा जुटेको बताए ।
घोडेपानीलाई केन्द्रित गरेर फूलबारी, मोहरेडाँडा, प्यारीबाराही ताललगायत सहायक गन्तव्यको पहिचान गरिएको छ । पहाडको उच्च स्थानमा रहेको घोडेपानी र पुनहिल सूर्योदय, हिमशृङ्खला र गुराँसको जङ्गल अवलोकनका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य हो । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत पर्ने घोडेपानी–पुनहिल क्षेत्र अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको प्रमुख गन्तव्यमा पर्छ ।
पोखरादेखि नजिक पर्ने भएकाले यो क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा परेको छ । कोरोना भाइरसका कारण एक वर्षदेखि पर्यटक आगमन नुहँदा यो क्षेत्र सुनसान बनेको छ । बन्दाबन्दी हटेको र कोरोनाको जोखिम घटेपनि पर्यटक आगमन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन् ।
नयाँ वर्षमा घुम्न पाँचथरका तीन गन्तव्यको चाँजोपाजो मिलाउनुस है ! ४ दिन पहिले
वृद्ध सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान रेग्मी पक्राउ १२ मिनेट पहिले
संरक्षणमा हुर्किंदै पुष्पा २ हप्ता पहिले
बिस्केट जात्रामा ढुङ्गा हानाहान: रथ तान्दा १९ घाइते ! ४ दिन पहिले
चितवन प्रिमियर लिग मङ्सिरमा ३ हप्ता पहिले
सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल नियुक्त ४ हप्ता पहिले
देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली २ वर्ष पहिले
संसदमा सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली (लाईभ) ११ महिना पहिले
पुनः जन्म पाएको ११ चिनियाँ श्रमिकको उद्धार भएपछि महशुस ३ महिना पहिले
उद्योगी व्यवसायीलाई सेल्फ कवारेन्टाइनमा बस्न आग्रह १ वर्ष पहिले